Otu Nzúzo: Ndị Uwe Ojii Anwụchikọọla Mmadụ 151 n'Anambra
Previous Article Onyeisi Ndị Uwe Ojii Ọhụụ Awụchaala Na Steeti Anambra
Next Article Gọọmenti Anambra Etòó Ndị Uwe Ojii Maka Ijide Na Ịkpụpụ Ịkanda Ụlọ Ikpe
Dịka a sị na onye a gwara agwa ma ọ nụghị anụ, o mee emee ọhụ ahụ, mmadụ dị otu narị, iri ise na ótù abụrụla ndị a nwụchikọrọ site n'aka ndị uwe ojii na steeti Anambra maka ihe gbasaara òtù nzúzo. Ndị a na-enyo ènyò na ha bụ ndị òtù nzúzo bụ ndị a nwụchikọrọ n'ime izuụka abụọ site na mpaghara ebe dị iche iche na steeti ahụ.
Nke a bụ nke e mere ka a mara site n'ozi a kụpụrụ nso nso a, bụkwa nke onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ndị uwe ojii na steeti ahụ, bụ maazị Harụna Mọhammed binyèrè aka na ya. Ya bụ ozi kọwara na e jidere ndị ahụ site na ngagharị na ághá ndị uwe ojii ahụ bùrù nso nso a, site njikọ aka ha na ngalaba pụrụ iche na-ahụ maka ibu agha megide òtù nzuzo, bụ 'Special Anti Cultism Unit' nakwa njikọ aka nke ụlọ ọrụ 'Special Anti Robbery Squad' (SARS).
Dịka ozi ahụ siri kọwaa, mmadụ asatọ n'ime ndị ahụ a na-enyo ényò bụ ndị e jidere n'Awka; mmadụ iri na isii bụ ndị e jidere n'Ọkịja; mmadụ iri na abụọ ka e jidere na Nanka; iri na otu ka e jidere na Nkwelle, jide iteghete n'Ogidi; nwụchikọọ iri na anọ n'agbata ụzọ Ajalị na Oko; nwụchikọọ iri na asatọ n'agbata ụzọ Enugwu-Ukwu/Nimo/Nise, wee jidezie iri asaa na asaa n'Achalla. Ndị ọzọ bụkwazị ndị e jidere site n'ebe dị iche iche, nke gụnyere Ọnịtsha, Awada, Urum, Ogbunike, Amawbia, Ukwulu, Ukpo na ebe ndị ọzọ.
Ozi ahụ gara n'ihu kọwaa na ihe e nwekọtara n'aka ndị ahụ gụnyere: mma ògè, anyike, tinyéré akwụkwọ kpọrọ nkụ a mazụrụ amazụ, bụ nke a na-enyo na ọ bụ ìgbó.
Ka ọ dị ugbu a, mmadụ iri isii na abụọ n'ime ndị ahụ ka a tọhapụgoro dịka ndị aka ha dị ọcha, site na nnyòcha ndị uwe ojii ahụ mere; mmadụ iri abụọ ka e kwùrù na ha erubeghị ịga ụlọ mkpọrọ, ma na-etinyezịrị ha anya ugbu a; mmadụ iri abụọ na ótù ka a ka na-enyòchakwa; ebe mmadụ iri anọ kwetàrà ma kwuputakwa n'ezie na ha bụ ndị otu nzúzó, ma bụrụkwa ndị a kpụpụgoro ụlọ ikpe, iji were ùsòró iwu nyụchaa ha anya.